Amanzi Amaphayiphu Esistimu Yamanzi, Abahlinzeki - Abakhiqizi baseChina Amanzi Amanzi
GD1 GD2 BS5163 AWWA C515 NRS Resilient Ehlezi Isango Valve nge Extension Uthi lokuphotha
Imininingwane GD1: 150≤H1≤1000, GD2: H1≥1000. Ibanga ukusuka kulayini ophakathi we-valve kuye emhlabathini kuzonikezwa yikhasimende. Lapho uhlinzeka ngemininingwane, sicela uqiniseke ukuthi iphutha akufanele leqe ± 20mm. Ifakwe i-T-wrench: amasethi ayi-10 wama-valve esango afanayo afakwe i-T-wrench eyodwa. Amakhasimende adinga ukuthenga lesi sidonsa uma edinga okuningi. Le valve yesango egqitshwe ngqo ifakwe i-BS 5163 ehleli phansi yesango le-valve noma i-FM / UL NRS ehleli phansi ihleli ...
Imininingwane Inikeza imisebenzi yakho kokubili Ukukhishwa Komoya namaValve Womoya / Umshini. Ikhipha umoya omningi ekuqaleni kwesistimu. Inikeza ukuvikeleka ekuweni kwepayipi ngenxa ye-vacuum. Veza inani elincane elinqwabelene lomoya ngesikhathi sokusebenza kohlelo olujwayelekile. I-NPT noma intambo yeMetric yokufaka. Ingcindezi Yokusebenza Nesimo Sokushisa 16bar kukalwe ngo -10 ° C kuye ku-120 ° C. Ukugqokwa kwe-Corrosion Protection Fusion noma i-liquid epoxy edwetshwe ingaphakathi nengaphandle. Imininingwane Yezinto Bo ...
I-9708 Value Relief Valve Yomoya Oyedwa
Imininingwane Inikeza imisebenzi yakho kokubili Ukukhishwa Komoya namaValve Womoya / Umshini. Ikhipha umoya omningi ekuqaleni kwesistimu. Inikeza ukuvikeleka ekuweni kwepayipi ngenxa ye-vacuum. Ifaka zombili izici ngaphakathi kwethole elilodwa, zihlangene futhi zonga imali. I-NPT noma intambo yeMetric yokufaka. Ingcindezi Yokusebenza Nesimo Sokushisa 16bar kukalwe ngo -10 ° C kuye ku-120 ° C. Ukugqwala Ukuvikelwa Fusion enamathela eziboshwe noma liquid epoxy zaveza ingaphakathi nengaphandle ...
9701 okuzenzakalelayo Air Vent Valve
Imininingwane I-orifice encane ka-1/16 in. (1.6mm) ukukhipha umoya ngaphansi kwengcindezi ngesikhathi sokusebenza kwepayipi okujwayelekile. I-float ixhunywe ku-vent ngenqubo yokuxhuma ekwazi ukusebenzisa i-vent ngaphansi kwengcindezi ephelele yepayipi. I-NPT noma intambo yeMetric yokufaka. I-WRAS ivunyelwe. Ingcindezi Yokusebenza Nesimo Sokushisa 16bar kukalwe ngo -10 ° C kuye ku-120 ° C. Ukugqokwa kwe-Corrosion Protection Fusion noma i-liquid epoxy edwetshwe ingaphakathi nengaphandle. ...
9208 okuzenzakalelayo Air Valve
Imininingwane I-9208 iyi-valve yokusebenza komoya ezenzakalelayo ephezulu. Isihlalo sokuqina sihlinzeka ngophawu oluthembekile oluyi-100%. Idizayini yekamelo elilodwa inikeza ukusebenza okungcono kunokwakhiwa kwamakamelo amabili. Ijubane lokudla nelokukhipha lingafinyelela esivinini somsindo. Idizayini ifakwe kalula ngensimbi engenasici engagqwali. Indandatho yokufaka uphawu ye-EPDM. I-Flanged ne-drilling ihambisana ne-EN 1092-2 PN16 (Ezinye izinhlobo ziyatholakala ngesicelo). I-Outlet yowesifazane intambo acc. Ukuya ku-DIN ISO 228. ...
Imininingwane Igumbi elilodwa le-orifice ephindwe kathathu yokusebenza komoya ne-vacuum yokukhipha okuzenzakalelayo. Idizayinelwe ukusebenza ngeziphuzo ezithwala izinhlayiya eziqinile ezifana nendle namanzi angcolile. Khipha umoya ngesikhathi sokushaja kohlelo kanye nomoya wokungenisa ngesikhathi sokukhipha uhlelo. Ukwehlukaniswa okuphelele kuketshezi kusuka kumshini wokubeka uphawu kunikeza izimo zokusebenza ezinhle kakhulu. Zonke izingxenye zangaphakathi zensimbi zenziwe ngensimbi engagqwali. Flanged futhi imishini ihambisana EN1092-2 PN16 (Ezinye izinhlobo ar ...
I-9101A I-Value Relief Valve Yomoya Ophindiwe
Imininingwane I-Dual air release vent imithamo emincane eqoqiwe yomoya ngesikhathi sokusebenza kohlelo olujwayelekile. Vumela ukungena kwemithamo emikhulu yomoya ngesikhathi sokukhishwa kwepayipi. Vumela ukukhipha umoya omkhulu ngesikhathi sokugcwaliswa kwepayipi. Nikeza ukuvikelwa ekuweni kwepayipi ngenxa ye-vacuum. I-Flange nokubhola kuthobela i-EN 1092-2 PN16 (Ezinye izinhlobo ziyatholakala uma ucelwa). Ingcindezi Yokusebenza Nesimo Sokushisa 16bar kukalwe ngo -10 ° C kuye ku-120 ° CC ..
I-Value Relief Valve Yomoya Oyedwa engu-9100
Imininingwane Ihlinzeka ngemisebenzi yokuKhululwa Komoya kanye nama-Valve we-Air I Vacuum. Ikhipha umoya omningi ekuqaleni kwesistimu. Inikeza ukuvikeleka ekuweni kwepayipi ngenxa ye-vacuum. Ifaka zombili izici ngaphakathi kwe-valve eyodwa, icwecwe kakhudlwana futhi iyonga. Flange futhi imishini EN1092-2 PN10 / 16; I-ANSI B16.1 Isigaba125. Ingcindezi Yokusebenza Nesimo Sokushisa 16bar kukalwe ngo -10 ° C kuye ku-120 ° C. Corrosion Protection Fusion eboshwe enamathela noma epulazini liquid ...
I-6125 DIN3356 Globe Valve
Imininingwane Amaphayiphu ahambisana ne-DIN3356. Isihlalo sensimbi. Isiqu se-stem esishintshekayo. Ukupakisha okungashintshwa ngaphansi kwengcindezi. Kutholakala nge-flanges EN1092-2 2 PN10 noma i-PN16, i-ANSI B16.1 Class 125. (Ezinye izinhlobo ziyatholakala ngokucelwa) Ubuso nobuso ngobuso ngokuya ngochungechunge lwe-DIN3202 F1. Ingcindezi Yokusebenza Nesimo Sokushisa 16bar kukalwe ngo -10 ° C kuye ku-120 ° C. Ukuvikelwa Kokugqwala Ngaphakathi nangaphandle kuketshezi lwe-epoxy .. Imininingwane Yezinto
I-6123 EN13789, i-MSS SP-85 Globe Valve
Imininingwane Amaphayiphu ahambisana ne-EN13789, i-MSS SP-85. Isihlalo sensimbi. Isiqu se-stem esishintshekayo. Ukupakisha okungashintshwa ngaphansi kwengcindezi. Kutholakala nge-flanges EN1092-2 PN10 noma i-PN16, i-ANSI B16.1 Class 125. (Ezinye izinhlobo ziyatholakala ngokucela) Ubuso nobuso ngobuso ngokuya ngochungechunge oluyisisekelo lwe-EN558-1 no-ASME B16.10. Izinketho ezingama-150 psi ziyatholakala. Imininingwane Yezinto Ezenziwe Ngomzimba I-iron cast cast Bonnet grey cast iron Trim bronze Disc bronze Stem stainless steel